Uyilo lweApartment iMarbella, Uyilo olukufutshane nePuerto Banus kunye nabantu abane - I-Airbnb
Uyilo lweApartment iMarbella, Uyilo olukufutshane nePuerto Banus kunye nabantu abane
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguLola
Ifulethi langoku elikwindawo entle yokuhlala edolophini, ejikelezwe ziivillas zodidi oluphezulu, ezinamachibi ama-2 kunye ne-1-Yangaphandle yeJacuzzi (efumaneka kuphela ngexesha lonyaka). Inika intuthuzelo ephucukileyo kunye nendawo ebalaseleyo nje imizuzu eli-10 ngemoto ukusuka ePuerto Banus kunye nemizuzu eli-15 ngemoto esuka eMarbella.
Indlu ilungele abantu aba-4. Sinebhedi yesofa kwigumbi lokuhlala.
Ijikelezwe zezona zifundo zegalufa zibalaseleyo kwiCosta del Sol, indawo efanelekileyo yokuphumla iintsuku ezimbalwa neqabane lakho okanye usapho lwakho.
“Fumanisa ukufudukela kwethu ezidolophini, kunye namachibi amabini angaphandle kunye neJacuzzi ebukekayo yangaphandle”
- Lola, umbuki zindwendwe wakho
Ibhedi ekwayisofa, I-Queen bed
Ibhafu enamanzi ashushu esetyenziswa nangabanye, I-Hammock, Indawo yokupaka ngaphakathi esimahala, Ipuli esetyenziswa nangabanye, Izitulo zokugcakamela ilanga
4.98 (iingxelo zokuhlola 194)
Le ndawo ikwindawo yokuhlala yaseLos Palacetes, ijikelezwe ziivillas ezitofotofo, kunye nezona ndawo zibalaseleyo zegalufa kwiCosta del Sol, ejikelezwe yindalo kunye nemizuzu nje embalwa ngemoto ukusuka kwiilwandle ezintle zasePuerto Banus naseMarbella.
Umgama ukusuka eMalaga airport - Costa del Sol
imizuzu eyi-50 ngemoto xa indlela ingaxakekanga